Haweeney ku soo xajinaysa lacag ay rubuc Qarni kaydsatay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Haweeney ku soo xajinaysa lacag ay rubuc Qarni kaydsatay
Hooyo u dhalatay dalka Indonesia ayaa ka mid noqotay Malaayiinta Musliiminta ee xajka gudanaysa sannadkan 1440-Hijriyah.
Maamadaasi oo magaceeda lagu soo koobay Maryani ayaa waxa uu Ilaahay u rumeeyey Riyadeeda inay mar uun soo gudato Waajibaadka xajka, oo ay soo dawaafto magaallooyinka Barakaysan ee Maka Al-mukarama iyo Madiinatul munawara, kadib, markii ay muddo 26-da sanno kaydsanaysay Kharajkii ay ku soo xajin lahayd.
Wareysi ay Wakaalladda Wararka Turkiga ee ANADOLU siisay ka hor intaysan maalintii Jimcaha u soo dhoofin Sacuudiga waxay sheegtay inay ka shaqeysan jirtay waxyaabaha Qashinka ee la daadiyo, oo intay nadiifiso dib u sii iibin jirtay
“Waxaan mar kasta doonayey inaan soo aado Xajka” ayey tiri Maryani oo ah Hooyo 4 carruur dhashay.
Waxay kaloo sheegtay inuu rabitaankeeda Xajka sii xoogeystay, kadib, markii uu Allaha U Naxariistee Saygeedii uu geeriyooday sannadihii 1980-aadka.
Waxayna Lacag kaydsashadda soo waday ilaa sannadkii 1993-kii, balse, ma aysan aqoonin qaabka lagu heli karo Lacagta Xajka, maadaama ay korinaysay 4 carruur oo Aabahooda geeriyooday.
“Sidaasi ayaan u bilaabay inaan qashinka ururiyo” ayey tiri Maryani, waxayna sii raacisay inay hawsha bilaabi jirtay maalin kasta Salaadda Subax kadib.
Hooyadaas oo 64-jir ah waxay ururin jirtay waxyaabaha qashinka lagu tuuro, sida koobabka caagta ee la isticmaalay, Dhalooyinka iyo Armaajooyinka la sii iibin karo.
“Marka uu roob xooggan da’ayo, waxaan urursan jirey Bacaadka si aan u iibiyo” ayey sii raacisay.
Maryani oo ku noolayd Cirifka ama Jiinka Webiga lagu magacaabo Ciliwung oo ah Webiga ugu weyn ee dhex mara Caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta, waxayna mararka qaarkood qodi jirtey ciidda Webiga oo ay u iibin jirtay sida qalabka Dhismaha.
Waxay maalin kasta ciidda bacaadka ku cabayn jirtay ugu yaraan 5 jawaan maalin katsa, waxaana halkii jawaan oo ciiddaasi ah looga iibsan jirey lacag dhan 8,000 oo Lacagta Rupiyah ee Indonesia oo u dhiganta 0.56 cent oo Dollar ($ 0.56).
Sannadkii 2012-kii, Hawl adag kadib oo socotay ku-dhawaad 20-sanno waxay Lacagta ay kaydsatay gaartay 25-million oo Rupiyah oo u dhiganta 1,750 Dollar, taasi oo ah lacagta celceliska ee laga doonayo in la isku diiwaan geliyo Xajka ee waqtigaas.
Tan iyo xilligaasi, waxay sii kordhisay hawsheeda adag ee shaqadii Qashin Ururinta iyo Bacaadka, si ay isaga bixiso lacagtii ka harsanayd oo dhan 10 million oo Rupiyah oo u dhiganta 699.82 Dollar.
Hooyo Maryani waxay Lacagta Xajka u si qarsoodi ah u kaydsanaysay sannado badan iyadoo aysan Qoyskiida iyo Qraaabadeeda la soconin arrintaasi.
Xitaa carruurteeda ma aysan ogeyn waqtiga dheer ee ay Hooyadooda ururin jirtay waxyaabaha qashinka iyo bacaadka si ay isaga bixiso Kharajyadda Xajka.
Hooyo Maryani waxay carruurteeda ku wargelisay arrintaasi bishii April ee sannadkan, kadib, markii ay heshay warka ku saabsan Jadwalka Dhoofkeeda Xajka, waxayna farriintaasi uga timid Wasaaradda Arrimaha Diinta ee dalka Indonesia.
Ugu dambeyntii, deriskeeda waxay ugu dambeyntii maqleen Qorshaha Dhoofitaanka Maama Maryani iyo waxa ay carruurteeda ugu oggolaadeen inay sannado badan raadiso Kharajkeeda Xajka.
Mid ka mid ah Wiilasha ay dhashay oo lagu magacaabo Danya Mulyana oo shaqadiisu tahay Kaaliye Barxadda la dhigto Gaadiidka ayaa sheegay inuusan isaga xitaa la soconin inay Hooyadiisa lacag u kaydsanaysao si ay u soo gudato Waajibaadka Xajka.
Maama Maryani waxay sheegtay inay 26 sanno tahay muddo aad u dheer, balse aysan marna ka walaacin xilliga ay awoodi doonto inay u socdaasho dhulka Barakaysan, una soo gudato Xajka.
“Waxa aadka muhiimka u ahayd ayaa ah inaan wax kaydsaday, mar kasta waxaan ahay qof ay ka buuxdo Hami Weyn, oo marna ma dareemi jirin Daal” ayey ku sheegtay Wareysi ay siisay Wakaalladda Wararka Turkiga ee ANADOLU.
Maama Maryani waxay kaloo sheegtay inaysan alaabta ay soo ururiso isla markiiba iibin jirin ee ay ay iibin jirtay sannad kadib, si ay Dhaqaale badan uga samayso.
“Isla marka aan Ashyaadaasi sii iibiyo sannadkiiba, waxaan ka heli karaa 1.2 million oo Rubbiyah oo u dhiganta 84 Dollarka Maraykanka” ayry tiri.
Waxayna sii raacisay inay kaydsan jirtay 70-Dollar, iyadoo inta soo hartayna ay kharaj-gareyn jirtay Hawlaha Qoyskeeda.
Kharajka Maalinlaha, Maama Maryani waxay ku taageeri jirey carruurteeda oo badankooda mar hore guursaday, oo gooni-gooni u deggan.